इन्भेष्टर्स फोरमले कारोबार नै नगर्न आह्वान गरेपछि साउनदेखि बजार घट्ने संकेत ! सेयर कारोबारमा भ्याट नलगाउन माग
ARCHIVE, COVER STORY » इन्भेष्टर्स फोरमले कारोबार नै नगर्न आह्वान गरेपछि साउनदेखि बजार घट्ने संकेत ! सेयर कारोबारमा भ्याट नलगाउन माग
काठमाडौं - नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सेयर कारोबारमा मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) नलगाउन आग्रह गरेको छ । सेयर कारोबारमा भ्याट लगाउने तयारी भएको र त्यस्तो भ्याट लगानीकर्ताको थाप्लोमा हाल्न खोजिएको भन्दै फोरमले साउन २ गतेदेखि कारोबार नै नगर्न सबै लगानीकर्ताहरुलाई आह्वानसमेत गरेको छ ।
फोरमले बुधबारै विज्ञप्ति जारी गर्दै सेयर बजार भ्याटमुक्त क्षेत्र भएकोले भ्याट लगाउने बिषय आफूहरुलाई मान्य नहुने बताएको छ । सेयर कारोबारमा भ्याट लगाउने हो भने भ्याट लगाउन थालेकै दिनदेखि आफूहरुले सेयर कारोबार नै ठप्प पार्ने चेतावनी पनि फोरमले दिएको छ । हेर्नुहोस् पूर्ण विज्ञप्ति :